अर्थ | Ekata News
ग्लोबल आइएमई बैंकको ८.५ प्रतिशत ग्लोबल आइएमई बैंक डिवेन्चर २०८६/८७ ऋणपत्रको ३० लाख इकाई नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज ९नेप्से० मा सूचीकृत भएको छ । १० वर्ष अवधि रहेको यस ऋणपत्रमा वार्षिक ८.५० प्रतिशतका दरले प्रत्येक आर्थिक वर्षको ६/६ महिनामा ब्याज प्रदान गरिने बैंकले जानकारी दिएको छ । यस ऋणपत्रलाई रेटिङ्ग एजेन्सी इक्रा नेपाल लिमिटेडले [ICRANP-IR] A…
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउन माग गरेका छन् । नेपाल पोल एशोसिएसनको आठौं वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेसनलाई सम्बोधन गर्दै ढकालले विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए नगरिदिँदा करोडौं लगानी गरिसकेका परियोजनाका प्रर्वद्धकहरु संकटमा परेको बताए । अहिले धेरै जलविद्युत् कम्पनीहरुले अर्बौं लगानी गरिसकेको…
गुल्मी । मदाने गाउँपालिका गुल्मी जिल्लाको सबैभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तहमा परेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आव २०७६÷०७७ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन अनुसार मदानेमा जम्मा २५ लाख ४६ हजार मात्रै बेरुजु छ । यो कूल बजेटको ०.२८ प्रतिशत हो । प्रतिवेदन अनुसार मदाने लुम्बिनी प्रदेशकै कम बेरुजु हुने स्थानीय तहमध्ये…
काठमाडौँ । सरकारले गृह सचिवमा टेक नारायण पाण्डेलाई सरुवा गरेको छ । सोमबार९आज० वालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव पाण्डेलाई गृह सचिवमा सरुवा गरेको हो । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा तानिएको छ । बैठकले वित्त आयोगका सचिव बेगेन्द्र शर्मा पौड्याललाई रक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ भने…
काठमाडौँ– सरकारले संकटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा गर्ने भएको छ । आइतबार संयुक्त सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्र्दै संकटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा दिने र रूग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रतिफल दिनसक्ने गरी सञ्चालनको वातावरण तयार गर्ने घोषणा गरिएको हो । साझा न्यूनतम कार्यक्रम अन्तर्गत ‘आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम’को १३ नम्बर बुँदामा ‘वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी…
काठमाडौं। सुशासन र पारदर्शिताको मामलामा यसरी पनि तुलना गर्ने दिन आयो कि कहाँ धरहराझैं इमानका अग्ला सुशील कोइराला अनि कहाँको साम्यवादी नेता केपी शर्मा ओली ? ०७० सालमा सुशील कोइरालाले एउटा ऐतिहासिक निर्णय गरे, प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सम्पूर्ण मन्त्रालयले ५ हजार रुपैयाँमाथिको सरकारी खर्चको बिल भुक्तानी विवरण वेबसाइटमार्फत ०७२ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्ने। यो प्रक्रिया प्रारम्भ…
गुल्मी– दुई वर्षअघिसम्म तम्घास-सिमलटारी सडक हुँदै यात्रा गर्नेहरूको समस्या थियो हिउँदमा धुलोले यात्रा गर्नै नसकिने, बर्खामा हिलोमा फसेर गाडी गुड्नै नसक्ने । मोटरबाटो खुलेको ३० वर्षसम्म सास्ती भोगेका जनता सडक कालोपत्रे भएपछि ठूलो राहत हुने आशमा थिए । तर भैदियो उल्टो ।…
गुल्मी – गुल्मी जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै बेथिती मुसिकोट नगरपालिकामा रहेको फेला परेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परीक्षणको क्रममा अपारदर्शिताका २७ काण्ड फेला परेका हुन् । महालेखाले फेला पारेका अनियमिततामा नगरपालिकाले संघीय सशर्त र समपूरक अनुदान तथा प्रदेश समपुरक अनुदानको रकम नगरपालिका चालु शीर्षकमा खर्च गरेको देखि कुनै विवरण अद्यावधिक नगरेको…
मदानेको उपहार : ३१६ परिवारलाई नयाँ घर, ८५० लाई टिनको छानो
एकता न्यूज | असार २२, २०७८ - मङ्लबार
गुल्मी – विभिन्न कारणले घरबार विहीन हुने अवस्थामा पुगेका ३१६ परिवारलाई गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाले घर उपहार दिने भएको छ । पालिकाको आफ्नै लगानी तथा विभिन्न सरकारी निकायसँगको समन्वयमा भूकम्प, बाढी पहिरो लगायतका कारणले विस्थापित भएका र विपन्नताका कारण घर बनाउन नसक्ने परिवारलाई घर उपहार दिने भएको हो । पालिकाले वडा नं. ३ को सिर्सेनीमा…
विदेशबाट ल्याएका फोन साउनदेखि नचल्ने, बैध बनाउन कसरी गर्न सकिन्छ ?
आगामी साउन १ गतेबाट अवैध रूपमा विदेशबाट आयात गरिएको मोबाइल फोन ”नेपालमा नचल्ने” नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम -एमडीएमएस_ सञ्चालनमा आएसँगै त्यस्ता फोन नियमन गर्न सकिने अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यसबाहेक प्राधिकरणले हाल नेपालमा प्रयोगमा रहेका मोबाइल फोनहरूलाई पनि अनिवार्य दर्ता गर्न सर्वसाधारणहरूलाई आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रका अनुसार…
यसरी भयाे मदाने गाउँपालिका गुल्मीमा उत्कृष्ट र प्रदेशको छैठौं
एकता न्यूज | असार २१, २०७८ - सोमवार
गुल्मी । स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि स्वमूल्यांकनमा गुल्मीका १२ स्थानीय तहमध्ये मदाने गाउँपालिका उत्कृष्ट भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्यप्रशासन मन्त्रालयबाट लिजा नामक सफ्टवेयरले गरेको स्वमूल्यांकनमा मदाने गाउँपालिका उत्कृष्ट भएको हो । मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य…
काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीको मासिक तलबमा दुई हजार रुपैयाँ बृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले राष्ट्रसेवकको मनोबल बढाउने साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी दुई हजार बढाइएको जानकारी दिए । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दे उनले कोरोना– १९ को व्यवस्थापनमा बढ्दो खर्चका कारण अपेक्षाकृत तलब बढाउने अवस्था नभएपनि…
काठमाडाैं । सरकारले बालविकास सहयोगी कार्यकर्ताको न्यूनतम तलव १५ हजार पु¥याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो घोषणा गरेका हुन् । तलवका लागि संघीय सरकारले ८ हजार दिने र बाँकी रकम स्थानीय तहले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए । त्यस्तै सरकारल ३५ लाख विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था…
काठमाडौं । सरकारले पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार दिने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य रहेका पत्रकारलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका हुन् । त्यस्तै श्रमजीवी प्रत्रकारलाई ७ लाख सम्मको बिमामा ५० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले दिने पनि उनले घोषणा गरे
काठमाडौं । सरकारले आगामी १० वर्षभित्र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापीत गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले २०८८ सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापन गर्ने नीति लिएको बताए । शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले त्यसका लागि अध्ययन गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने पनि पौडेलले…